China Disposable Mwepu Uwe na nchekwa uwe Waterproof Mwepu Cover Gown Uwe factory na suppliers | ASN
Ricdị ákwà SMS
Ibu ibu 40gsm
Ule Uwe EN13795-1-2019, EC-REP
Njirimara Uwe ogologo, Gburugburu olu (Velcro), Rib cuff, eriri ukwu abụọ, Ultrasonic seam
Ihe ngwugwu 1 pc / akpa
Nka katoonu 60 * 44 * 36cm
Nnukwu ibu 7.5KG
- Olee otu ị ga - esi jụọ ajụjụ?
Pls gwa anyị ihe, nha, oke ngwaahịa ị chọrọ, yana usoro nnyefe ị masịrị gị. Anyị na-anabata ndị na-azụ ahịa oge mbụ. Naanị zitere anyị foto nke isiokwu ịchọrọ ka anyị nye ma ọ bụ gwa anyị ihe ị chọrọ. Anyị nwere ike ịnye gị ngwaahịa yiri ma ọ bụ ọbụlagodi.
- you nwere ike ịme ihe a haziri maka m?
Nke ahụ bụ ihe mgbaru ọsọ anyị! Anyị ga-achọ ịmepụta dịka echiche na ozi gị si dị. Enwere ike ime obere mgbanwe n'efu. Agbanyeghị, mgbanwe mgbanwe dị ukwuu ga-eweta ụgwọ ọzọ.
- Gini bu oge mbu?
Oge mbufe na-abụkarị ụbọchị iri anọ na ise.
- Gini bu usoro ugwo?
Anyị na-anabata T / T.
- Gịnị ma ọ bụrụ na nsogbu dị na ngwaahịa ndị ahụ mgbe ị natachara?
Anyị na-ese foto maka gị tupu izipu nkwenye. Ọ bụrụ na ị rịba ama ụkọ nrụpụta ọ bụla, biko zitere anyị ọkwa (foto ngwaahịa site na email). Anyị ga-edozi ihe adịghị mma ma ọ bụ kwụọ ụgwọ ndị ọzọ.
Nke gara aga: Ọkpụkpụ Orthopedic
Osote: Uwe PVC